SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
MAKORE anenge 800 apfuura, vaMaori vakatama kubva kuzvitsuwa zvePolynesia vachienda kuNew Zealand. Vasvika ikoko, vakaona kuti nyika yacho yakanga yakasiyana chaizvo nekwavakanga vabva. MuNew Zealand maiva nemakomo, zvitubu zvemvura inopisa, makomo echando uye sinou. Papera makore 500, pakazouyawo rumwe rudzi rwaibva kuEurope. Mazuva ano, vanhu vakawanda vemuNew Zealand vanoziva tsika dzekuEurope uye dzekuPolynesia. Vanopfuura 90% vanogara mumaguta. Pamaguta makuru ari pasi rese, guta reWellington ndiro rega rakanyanyoenda kumaodzanyemba.
Madziva ematope anopisa ari muNorth Island
Kunyange zvazvo New Zealand iri kwayo yega, gore negore kunouya vashanyi vanosvika mamiriyoni matatu nekuti nyika yacho ine zvinhu zvinoyevedza.
Muti unonzi silver fern unogona kureba mamita anopfuura 10
Shiri isingabhururuki inonzi takahe yaifungidzirwa kuti haisisiko yakazowanika muna 1948
MuNew Zealand mune mhuka dzakasiyana-siyana uye ndimo mune shiri dzakawanda dzisingabhururuki. Ndimowo munowanika tuatara, mhuka yakaita sedzvinyu iyo inogona kurarama kwemakore anosvika 100! Zviremwa-remwa nedzimwe mhuka dzakakura dzemumvura dzakadai semawhale uye madolphin, ndidzo chete mhuka dzakagara dziri muNew Zealand.
MuNew Zealand matova nemakore anoda kusvika 120 muine Zvapupu zvaJehovha. Vanodzidzisa Bhaibheri mumitauro inopfuura 19, kusanganisira mitauro yechiPolynesia yakadai sechiNiuean, chiRarotongan, chiSamoan, uye chiTongan.
VaMaori vachiimba vakapfeka mbatya dzekwavo
Zita rekuti New Zealand rinobva pane rekuti Zeeland, nzvimbo iri kuNetherlands. Zita rayakapiwa nevaMaori rekuti Aotearoa rinoreva kuti “Nyika Yemakore Machena Akaita Zienda Nakuenda.”
Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vemuNew Zealand vachitaura Chirungu, mutauro weko wechiMaori wava kushandiswa zvekare uye uri kutodzidziswa muzvikoro. Website yeZvapupu zvaJehovha, jw.org, inowanikawo muchiMaori.
VAGARI VEMO: MAMIRIYONI 4,7
GUTA GURU: WELLINGTON
NYIKA: NORTH ISLAND INE MAKOMO ANOPUTIKA UYE ZVITUBU ZVEMVURA INOPISA. SOUTH ISLAND INE ZVIURU ZVEMAKOMO ECHANDO